Kaputeni Frederick Marryat uye mashanu emabhuku ake eruwaru | Zvazvino Zvinyorwa
Kaputeni Frederick Marryat uye mashanu emabhuku ake eruzivo
Frederick kuroora akaberekerwa mu London Chikunguru 10 1792. Aive mutyairi uye akasvika padanho re kaputeni in the Royal Navy British. Yakanga iri zvakare shamwari yaCharles Dickens uye imwe ye vanyori vekutanga yemanoveli nezvehupenyu mugungwa. Ndakazviwana nekuda kwerudo rwangu rwemhando iyi. Saka nhasi ndinouya nemabhuku ake mashanu, akanyatsoenderana nemazuva ano ekuzorora, kupisa uye kuverenga kwakareruka.
1 Frederick kuroora
2 5 enganonyorwa
2.1 Imba yaMambo
2.2 Ngarava yemweya
2.3 Maitiro ekunyorera bhuku rekufamba
2.5 Imbwa yedhiabhori
Marryat akabatana ne Royal Navy pazera remakore gumi nemana kwaakashanda kusvika zera makumi matatu nemasere. Iye akapinda muchikamu che Hondo ya1812 y akava kaputeni kuvonga kukunda mumamishinari mazhinji ese ehondo nesainzi. Paakasiya chikepe chemauto akazvipira zvakanyanya kumabhuku. Zvanga zviri munyori wenyaya nemabhukuzvese zvakavakirwa pahupenyu hwegungwa uye zvakatsaurirwa kuna vechidiki zvinyorwa kana the kutyisa kwekukunda.
ari zviitiko uye zviitiko zvehupenyu hwake pagungwa ndiwo hwaro uye kukosha yemanoveli ake. Yokutanga, Frank Mildmay, rakaburitswa muna 1829, uye rakateverwa nevanopfuura makumi matatu, pakati paro zita raro rezvinyorwa rinomira Midshipman Nyore.
Muzhinji, basa rake rakajairika panguva yake, ine kunetsekana kwemhuri uye chinzvimbo chemagariro izvo zvinowanzo dzikirira chiito pagungwa. Vakachiyemura vanyori vakakura vakaita Joseph Conrad kana Ernest Hemingway, uye zvakare kufurirwa CS Forester uye chinonyanya kukosha pane zvese mumhando iyi, Patrick O'Brian. Muchikamu chayo chekupedzisira futi akanyorera vana. Zita rake rakakurumbira raive Nhapwa dzesango.
William seymour inherera yechidiki iyo yakagadzirirwa basa ramambo, uye iwe uchafanirwa kutanga iyo Aspasia, ngarava iyo iwe yaunowana ese marudzi ese ezviitiko uye nehondo kurwisa muFrance muvengi. Vamwe vevatambi uye zviitiko zvarinotaura zvinoenderana zvakananga nezviitiko chaizvo, senge kurondedzerwa kwekurwa pakati pedutu guru.
Marryat inotisvitsa mune ino zita ngano yeThe Flying Dutchman, ngarava yemweya ine mukurumbira pasi rose. Ngano yepakutanga yakatanga nemutungamiriri wengarava yechiDutch inonzi William Vanderdecken, uyo akaita chibvumirano nadhiyabhorosi kuti agone kugara achifamba mumakungwa zvisinei nezviitiko zvepanyama zvakaiswa naMwari murwendo rwake. Asi kana Mwari azviziva, mukuranga anomupa mhosva yekufamba nendeya zvisina chinangwa uye asingabate ivhu.
Maitiro ekunyorera bhuku rekufamba
Marryat akanyora pano, nekuseka kukuru uye njere, a kusetsa kusekesa pabhuku rebhuku rekufamba ndipo paive nehasha dzese munguva yake. Inotaurira akateedzana matipi enyaya yekufamba uko mufambi asingafanire kutsika nyika yaanoda kushanyira. Nyaya yemhando yepamusoro zvakare muzana ramakumi maviri nemasere.
Newton Forster ndiye protagonist werino uno iro anofanira kupona muhondo dzine ropa negungwa nevarume, avo vanomutungamira kuenda kuputsika kwechikepe muIndies uye vanomutadzisa kuwana chinzvimbo muCompical Company yezita rimwe chete. Uye chinzvimbo chaachave kaputeni, ndiko kuti, murume wegungwa.
Mumusoro uno tiri kuenda 1699 patinosangana nesloop yungfrau, ane chinangwa chekutenderera English Channel. Anofanirwa kudzivirira kubiridzira kubva kumahombekombe eFrance, nemukuru wake, Lieutenant Cornelis vanslyperkenIye zvakare mutumwa weumambo waMambo William neUnited States yeHolland.
Asi protagonist wenyaya iyi imbwa yake Malaspulgas, ane chitarisiko chinonzwisa tsitsi uye kutaridzika kwekunyengera izvo zvinomuita chinhu chekuvengwa nevashandi vese. Zviri smallbones, wechidiki mushandi waCornelis, uyo anosarudza kuzivisa hondo isina kota inotsigirwa nevamwe vake. Asi kushamisika kwemunhu wese, kunyangwe vachiramba vachirwa, imbwa inogara ichikwanisa kurarama uye ngano yakaumbirwa yake zvese zvemashura uye zvemadhiabhorosi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Kaputeni Frederick Marryat uye mashanu emabhuku ake eruzivo
Maitiro ekunyorera inoverengeka: kutsvaga kwesitaera